Kiiska Caa'isha: Sida baaritaanka hidda-sidaha DNA loo adeegsaday - BBC News Somali
Kiiska Caa'isha: Sida baaritaanka hidda-sidaha DNA loo adeegsaday
Labo qof oo maxkamad ay ku heshay kufsi iyo dil loo geystay Caa'isha Ilyaas ayaa maanta lagu dilay magaalada Boosaaso ee dowlad-goboleedka Puntland. Qof seddaxaad oo la xukumay ayaan la dilin.
Seddaxdaas qof waxay ka mid ahaayeen dad badan oo loo xiray kiiskii kufsiga iyo dilka Caa'isha Ilyaas oo 12 sano jir ahayd. Arrintaas oo ka dhacday Gaalkacyo, dhammaadkii bishii February, ayaa abuurtay xanaaq iyo isu soo baxyo ka dhacay qeybo ka mid ah dalka.
Hay'adda ayaa baaritaan ku sameysay sida uu falkaasi u dhacay iyadoo adeegsaneysay baaritaan lagu sameeyay raggii la eedeeyay iyo jirka Caaisha Ilyaas.
Hay'adda ayaa laantaa sirdoonka Puntland ay weydiisatay in ay baaraan falkaas iyagoo adeegsanaya qalabka casriga ah ee ay haystaan.
"Waxaan ka codsanay in la xafido meeshii maydka laga helay waxayna inoo sheegeen in la qaaday", ayuu yiri gudoomiyaha xarunta DNA-ga lagu baaaro ee Garoowe, Cabdirashid Maxamed Shire oo BBC Somali la hadlay Bishii May ee 2019-kii.
Cadeynta ay hay'addan soo bandhigtay waxaa la horgeeyay maxkamadda oo xukunkeeda ku saleysay arrintaas. Labadii racfaan ee ay qaateen qareennadii u doodayay raggii la eedeynayay, ayaa sidoo kale la hor dhigay caddeynta ka soo baxday baaritaanka hidda-sidaha.
Madaxa hay'adda Baaritaanka hidda-sidaha ayaa BBC Somali u sheegay: "Waxaan weydiisanay in maydka la geliyo qaboojiyaha oo aan la dhaqin, qofna uusan taabanin."
Waxyaabaha la baaray waxaa ka mid ahaa qofkii taabtay jirka Caa'isha iyo hidda-sidayaal kale. Wuxuu baaritaanka bilowday 25-kii bishii Febraayo. Tijaabooyiinkii laga qaaday ayaana loo gudbiyay xarunta Garoowe oo baaritaanka lagu sameeyay.
"Waxaan runtii ka qaadnay saambalo aad u badnaa. Qaar waxaan ka qaadnay qeybteeda gaarka u ah. waxaan kaloo tijaabo ka qaadnay qeybo muhiim ah, waxaa ka mid ahaa timeheedii, cidiyeheedii iyo qeybo ka mid ah jirkeeda oo dhaawacyo ay ku yaalleen", ayuu yiri Cabdirashid.
Waxaa baaritaan lagu sameeyay raggii lagu eedeeyay in ay kufsadeen Caa'isha ka dibna dilka u geystay.
"Wax macno ah ma sameynayo haddii aadan haysan saambaladii aad soo qaaday wax la barbardhigo", ayuu yiri madaxa hay'adda baaritaanka sameysay.
"Wax yaaabaha cajiibka ah ee inoo soo baxay waxa ay ahaayeen in dhecaan ragga ka yimid inaan meesha laga helin. Taas waxay cadeyneysaa in dadkii geystay kufsiga ay ka taxadareen oo ay is yiraahdeen isticmaala cinjirada la gashdo," ayuu BBC Somali u sheegay Cabdirashid Maxamed Shire.
Cabdirashid, gudoomiyaha hay'adda baaritaanka Hidda-sidaha (DNA), ayaa sheegay: "Nasiib wanaag waxaan haysanaa meelo kale oo fiican oo aan isticmaali karno. Waxaad ogataa in gabarkasto oo dhibaaato loo geysanayo ay dagaallameyso oo ay iska celineyso ninka dhibka u geysanaya".
Bilada Nobel ee daawada ee 2016 oo la siiyay Yoshinori Ohsumi